Shiinaha TCD Cyclo Vortex saar (Repalce TC) soosaarayaasha iyo alaableyda | bame damei kingmech
Awoodda: 3-1400m3 / h
Qalabka: Cr27, Cr28, CD4MCu,
Mashiinnada TCD waxaa loogu talagalay gaar ahaan isticmaalka joogtada ah ee codsiyada nooca slurry leh walxaha xasaasiga ah ee waaweyn ama jajaban. Noocyadan matoorrada hawo-qaadku waxay awood u leeyihiin inay maareeyaan qaybo waaweyn iyo sidoo kale kuwo aad u jilicsan, gaar ahaan halka ay ka jirto walaac ku halaynta walxaha. Mugga weyn ee astaamaha gudaha, oo ay weheliso naqshadeynta furfuran ee furan, waxay yareyneysaa isdhexgalka walxaha waxayna xaddideysaa xannibaadaha.
Naqshadeynta iyo Astaamaha Gaarka ah
1. Naqshadeynta qaabdhismeedka dhammaan biraha ee qaybaha qoyan-dhamaadka ayaa ku habboon labada qaabeynta naqshadda toosan ee horizontaland.
2. Naqshadeynta qalabka wax lagu duubo ee gaarka ah ayaa dejiya wareegga gudaha, kaas oo ku wareejiya tamarta dhexdhexaadiyaha la tuurayo. Wareejinta "jilicsan" ee tamarta ayaa xaddideysa xaddiga nabaad-guurka ee walxaha marka la barbar dhigo bambooyin caadi ah.
3. Meelo isku mid ah oo xajmi ah iyo xarumo kaladuwan ayaa go'aamiya cabirka ugu yar ee walxaha ee uu mashiinku xamili karo xaddidaadda xannibaadaha iman kara marka la ridayo qaybaha waaweyn.
4. Naqshadaynta mugga mugga weyn waxay yareyneysaa xawaaraha sii yaraanaya duugga iyo nabaad-guurka walxaha.
5. Golayaal adag oo xambaarsan, oo ka kooban rollers-taper culus oo culus, wiishka ugu hooseeya ee wiishka iyo fallaadho waaweyn oo fallaadh ah oo adag ayaa gacan ka geysanaya hawlgal aan dhib lahayn oo ku saabsan qaabeynta jiifka iyo toosan labadaba.
6. Isku-xidhka "-10" (dash 10) ee u gaarka ah dhammaadka-isku-xidhka oo ka kooban V-Seals, siddooyin laba jeer oo piston ah iyo shaashad dibedda ah oo leh shaybaarro dufan leh oo dufan leh ayaa ah heerka kulammada salka ku haya.
7. Helitaanka qotominta dunmiiqa toosan waa mid caadi ah oo dhererka usheeda dhexe way kala duwan yihiin sida caadiga ah mashiinnada bamka ee WarmanVSD (SP) iyo VSDR (SPR).
Waajibaadka Wareejinta Kaarboonka
Bullaacadaha iyo Waxtarka leh
Waajibaadka Xiirashada Hoose
Hore: Bam-badeedka 'SSD Submersible Pump'
Xiga: VFD Vertical Froth saar (Repalce AF)
API610 OH4 saar RCD Model
API610 BB5 (DRM) saar
DGD Dreege saar for Sand iyo quruurux bamka (Repal ...